Xiddig bartilmaameed u ahaa Kooxda Arsenal oo sheegay inuu jecel yahay inuu ka ciyaaro Premier League – Gool FM
Xiddig bartilmaameed u ahaa Kooxda Arsenal oo sheegay inuu jecel yahay inuu ka ciyaaro Premier League
Haaruun April 3, 2020
(London) 03 Abril 2019. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha Ingiriiska, xiddigii bartilmaameedka u ahaa Kooxda Arsenal ee Jonathan David ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League, inta lagu guda jiro xirfaddiisa ciyaareed.
Weeraryahanka ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee 2019-20 kooxda reer Belgian ee Gent, isagoo loo diiwaan diiwaan-geliyay 18 gool iyo siddeed caawin 27 kulan oo horyaalka uu ciyaaray.
Intaa waxaa sii dheer, Arsenal ayaa la sheegayaa inay suuqa ugu jirto weeraryahan cusub, iyadoo ay ugu wacan tahay mugdiga hareeyey mustaqbalkiisa Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana David uu xaqiijiyay inuu ku faraxsanaan lahaa inuu fursad u helo ka ciyaarista Premier League.
Isagoo la hadlayey Wargeyska The Guardian ayuu arrintaan qirtay waxa uuna yiri David: “Waqtigan la joogo waxaan ciyaarayaa ku dhowaad daqiiqad kasta oo ciyaar walba ah, taasna runtii waxay iga caawisay inaan gaaro heer aan u baahanahay, hubaashii waxa ay isiisay inaan helo waqti ku filan garoonka dhexdiisa si aan u sii wado horumarka.
“Ma doonayo inaan meel uun aado oo aan kursiga keydka fadhiyo, sidaas darteed waxay ku saabsan tahay qaadista tallaabada saxda ah, waxaan doonayaa inaan noqdo mid ka mid ah weeraryahannada ugu fiican adduunka, taasi waa yoolkayga.
“Horyaalka Premier League waa kan ugu fiican adduunka uguna tartammada badan, sida iska cad taasi waa meesha aan jeclaan lahaa inaan ka ciyaaro mustaqbalka.”
David ayaa dhaliyey 37 gool 83 kulan oo uu u saftay kooxda Gent tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 2018-kii, wuxuuna heshiiskiisa uu haatan kula joogo kooxda reer Belgian uu ku egyahay sanadka 2023-ka.
KASHIFAAD: Garry Neville oo shaaca ka qaaday sababtii rasmiga ahayd ee uu Cristiano Ronaldo uga tagay Kooxda Manchester United
“Reece James ayaa ka wanaagsan Trent Alexander-Arnold” – Ciyaaryahan Chelsea u soo ciyaaray